"Hanzvadzi Hua Yang"
Broadcast chiteshi: Joka TV inowanikwa pane iTalkBB Chinese TVKukwikwidzana kwakakwira-Popularity chinzvimboTarisa
Dhiza TV neFengxing.com yakakura-nhandaro chirongwa chevaraidzo "Sista Pamusoro Maruva", iyo yakatanga kushambadzirwa panguva imwechete muIstanbul naPamukkale, vakapedza rwendo rwekufungidzira .. Mufananidzo wemukomana anodziya Ma Tianyu uye mwarikadzi Lin Zhiling akaremekedzwazve. Mukuseka kwaLi Zhiyan nedzidziso dzaSista Fan, ngoro yekutakura Iko kutapira kwerwendo kunopfuurira kunyungudira chira, iyo yekugezesa uye kicheni imwechete? Ipa iwe rwendo rwekudanana kuenda kunzvimbo dzekunze. Mushure mekufamba kwevarombo, kumabiko asina kujairika, nemakambani aLi Zhiyan, masisitendi akatanga "kukara" chikafu, uku Ma Maanyany achishandisa "Wei Dun" kumutsa kutsamwa kwevanhu.PaFan Sista vakatarisana naMa Tianyu uyo ​​akange adzoka, akange achitaurirana zvekudzidziswa zvekare. Nuan Nan akadzoka kuzowana musikana wemumugwagwa uyo akadzingwa kubva mumugwagwa.
Zvakaitika kuti vari munzira kuenda kuimba yekutandarira, mumwe musikana aifamba mumugwagwa aimutsa hushamwari hwemwana wekwaMai Tianyu.Haana kukwanisa kutsungirira kuchikwata chechirongwa kuti abhadhare muhomwe yake kuratidza rudo nekurudziro.Ndaizvozvo, nyika yakanga isina hutsinye. Patinodzokera kunzvimbo yekutanga, musikana akabva anyangarika pasina chirahwe, achisiya murume anodziya asingatauri uye akavharwa. Pakanzwikwa kurira kwechijekeswa nerunyoro zvishoma kuburikidza nemakiromita emakiromita, yakaendeswa zvakare munzeve dzaMai Yuyu.Akazopedzisira achiona kurota kwake kwerudo rwemurume anodziya mushure mekunzwa kurira.
Asi kumashure kweKunyumwa kwaive "kwakaipa nhau" imwe mushure meimwe. Ndege yacho yakati hapana chakanaka, chinja bhazi, fan fan "inonaka uye inovava." Kuti dzisakanganise kuzorora kwaSista Fan, hanzvadzi dzakaungana muNange, Li Zhiyan akabvisa jasi ramambo ndokuratidza hunyanzvi hwekuita mutete naAunt Xue, anova murume, zvakaoma kuti titarise zvakananga pairi.
Nekudaro, iyo inonyanya kutarisirwa chikamu cheichi "Sista Hua Yang" ndiyo inopisa yemakore-2000 inopisa chitubu. Pane chirevo: "wakanaka kana kwete, iwo mvura yevakuru; kwete tsvarakadenga, chiuno cheZhiling," hanzvadzi dzava kuda kupinda mumvura, uye vachengetedzi vaviri vanofanira kuenda navo. Tete Xue's "Ini ndinopfeka underwear uye ndikuperekedze mumvura" akamanikidza Ma Yuyu kukanganisa, uye chirevo chemwari "Ini ndakapfeka (suti yekushambira)" chakakunda zvakananga mutsara wepfungwa waMa Yuyu ndokuita kuti zviome. Sexy, yakanyorova, yako yese yekufungidzira nzvimbo inoratidzwa mune chaicho, hanzvadzi Zhiling iri kupisa uye yekugeza pamwe neanamwari mwari, shanje chete, godo uye kuvenga zvinogona kumiririra nyika yemukati yeLingfen.
Broadcast chiteshi: CCTV-1, inowanikwa kuTalkBB Chinese TVKukwikwidzana kwakakwira-Popularity chinzvimboTarisa
Nyeredzi: Li Youbin, Li Ge, He Minghan Rudzi: Kuongorora Kwematsotsi
Liu Yusheng, akashanda semupurisa wematsotsi kwehupenyu hwese, akagadzwa kuve Secretary-General weSisekelo.Ainge achinetsekana nebasa rake paakatanga kusvika paSisekelo. Paainzwa uye nekupupurira kuti mamwe magamba akaitira kururama akatadzirwa nekuda kwehumwari kwevanonunurwa uye kusakwana kwemasangano ekudzivirira ezvemagariro, akafunga zano rekuhaya gweta reSiseko kune akashinga nekuda kwegwaro rakazvimirira. Gweta rine mukurumbira Wang Yujia akazvimiririra, uye mutori wenhau Su Lili akauya pamberi. Rega Liu Yusheng ave nekunzwisisa kutsva kwebasa rehwaro. Asi muhupenyu chaihwo, mutengo wekuita neushingi wakakwira kwazvo.Kana kana waparara, mutengo uyu unowanzochinja hupenyu hwemunhu. Mudzidzi wepakati apasa anonunura murume akachembera mumugwagwa.Akashatiswa nehama dzemurume mukuru.Liu Yusheng akatungamira nhaurirano yechiitiko ichi munharaunda.Akatsigira aya maitiro ehushingi mumaonero eruzhinji nemutemo, izvo zvakaita kuti vanhu vanzwe kuti Kuda kwake kubatsira vanhu kwakanyaradzwa. Nekuenderera kwavo kuita, iwo mweya munharaunda wakanatswa, uye basa rekushinga kune hwaro rave nekuwedzera.Liu Yusheng zvakare ane nzwisiso itsva yebasa iri. Iyo firimu iri padyo nehupenyu, inosimudzira kururama, uye izere nesimba rakanaka.
"Tonhorera baba naamai vaPretty"
Nyeredzi:Li Guangjie, Tong Liya, Zhao Ziqi, Gao Yalin, Gao Lu, Zhu Rui, Zhou Dehua, Chen Wenqi
Type: Urban Emotion
Zuva Dalei akarambana nemukadzi wake Su Yun makore mashoma apfuura, uye vaviri vevana vaigara naSu Yun. Su Yun akangoerekana aenda kunoshanda kuHong Kong kwegore uye akasarudza kusiya mwana kuenda kuSun Dalei kutarisirwa. Sun Dalei aisakwanisa kuchinjika kuda kutiza kwechinguva, uye mukomana waSu Yun Huang Xinhua akatora danho rekutarisira vana. Kuita kwaHuang Xinhua kwakaita kuti Shumba Dalei ave neshungu yekukunda, uye vaviri ava vakaramba vachiita "hondo yekukunda" vana. Zuva Dalei aive akabatikana nebasa rake zvekuti akaramba achidimbudzira chipikirwa chake pamberi pevana vake, uye vana vake zvishoma nezvishoma vakaswedera pedyo naHuang Xinhua. Kutya kweSun Dalei nezvekuroora kwakasiya mukwikwidzi wake Fan Li achirwadziwa zvikuru, uye Sun Dalei akawira mumamiriro e "kurwiswa nemuvengi". Mushure mekudzidza kubva pakurwadziwa, Sun Dalei akashandisa zviito zvinoshanda kudzorera kuvimba kwevana uye munhu wese, asi iyo kambani yakaenda kubhuroka. Huang Xinhua mwanasikana waHuang Xiaoying akaziva kuti aive murume akasimba kutora mutoro muhondo yeWits naSun Dalei.Vaviri ava vakakwezvana uye vakatanga kudanana. Vachitungamirwa naHuang Xiaoying nevana vake, Sun Dalei zvishoma nezvishoma akakura kuva baba vane mutoro uye vane mutoro uye murume akanaka .. Hazvina chete kuti akawana kuzivikanwa kwaHuang Xinhua nevana vake, akawanawo rudo rwaHuang Xiaoying, uye pakupedzisira munhu wese akawana izvo zviri zvake. Yako mufaro.
"Mumwe Makumi Mazana Cold Jokes Movie Version"
Starring:Ajie / Huang Zhenji / Baomu Zhongyang / Shanxin / Suzaku Orange /
Genre: Komedi / Mifananidzo / Kufungidzira
Muchikamu chechitanhatu chemwaka wechipiri we "One Hundred Zviuru Cold Joke", murume asina kutaurwa protagonist (akataurwa naAjie) mushure mekukunda King of birds uye Shit, akakonzera pasi kutambudzika zvisati zvamboitika nekuda kwekuputika kwesimba rake Tucao. Njodzi, iyo vhezheni vhezheni yenyaya inotanga. Munzvimbo yekufambisa mweya, wechirume protagonist netsaona akaenda kune isinganzwisisike "nguva yakatetepa", ndokunyorazve nhoroondo yekuparadzwa kwepasi nerubatsiro rwevanhu vasinganzwisisike, ndokudzokera kune yakapfuura kuzoita gamba rakaponesa pasi; Zvinhu zvakaitika, nguva nenzvimbo zvaive mhirizhonga, uye iwo mativi-maviri mavara emhando dzakasiyana akafamba achienda kunyowani wechirume protagonist.Murume protagonist akasangana naLi Jing (akataurwa naBaomu Zhongyang) naNezha (akataurwa naShanxin) mune fafitera. Snow White (yakataurwa naVermilion Orange) uye Pinocchio (yakataurwa naHuang Zhenji), kuitira kuti adzorerezve nguva nenzvimbo, mhirizhonga, munhu wese anotanga rwendo rwekuchengetedza nyika zvakare ...
Starring: Chokwadi Hao / Guo Xiaodong / Huang Xuan / Zhang Lei / Mai Ting
Kutanga64Sirivheri Bear Mubayiro kuBerlin International Film festival Yakasarudzika Artistic Achihwina Mubayiro
Kutanga51Taipei Goridhe Bhiza Mutambo Mabhiza eGoridhe Mubayiro Yakanakisa firimu
Tsaona mumakore ake okuyaruka yakaita kuti mukomana Pony (Huang Xuan) apererwe nemeso mumeso ake .. Mushure mekuedza kuzviuraya, Pony akasimba akasimuka achienda kunzvimbo yemapofu inomiririrwa naSha Fuming (Qin Hao) kutora basa. Pano, kune vanhu vazhinji mapofu seXiaoma akaunganidzwa .. Kunyangwe ivo vakazvarwa kana kuwana, kugara murima rakajairwa kunogadzira ushamwari hwakadzika uye hwakasimba pakati pevanhu mapofu.
Chiremba Wang (airidzwa naGui Xiaodong) nemusikana wake Xiao Kong (yairidzwa naZhang Lei) akauya achibva kure kuti aende kuna Sha Fuming.Inzwi rechikadzi uye kufema kwegomba kwakaita kuti mwoyo waXiao Ma utambe, uye anoramba achisimba uye achisarudza Xiao Ma akateedzera moyo wake wemukati. Izwi rakaramba richiswedera pagomba diki. Mushure maizvozvo, mukadzi webhudzi webvudzi anonzi Xiaoman (Huang Lu) akaonekwa muhupenyu hwaXiaoman.Nguva yakaenderera mberi, Xiaoma akatanga kuve nekunzwa Xiaoman.
Phillip Island penguin kuuya inonakidza kunoonekwa!
Iyo Moshi CBD ichave yakapunzika! Kuvhara nzira kunoenderera kwemakore akati wandei
Sei usingaendi kunoshanyira nzizi huru nemakomo eChina, nei uchienda kuJapan? Wakakodzera (⊙o⊙)
Ko zvakadii nezvenguva refu ndangariro uye kutendeseka kwakanaka? YeJapan NHK Chiteshi cheTerevhizheni Zvakavanzika Kuti Vashanyi veChinese Vanonyengerwa Sei muJapan
kutaura sei? Nei baba ava vechiChinese vangade kuviga mari yakawanda kudaro vochengeta hurombo hwakakura, kupfuura kumwanakomana wavo
Vekune dzimwe nyika maChinese vakati vakashaya remuromo kuti vataure nezvenzvimbo yekuvaka yeAustralia yakachera svinga remapepanhau ekuChina ane $ 50 nemari! Chinese: "Mari ndeya baba vangu, uye ndakaiviga kuitira kunzvenga mutero!" Yakaenda kudare kuti igovane mari uye pakupedzisira yakasvika muchibvumirano chakavanzika!
Ndinofanira kuiisa sei? Baba ava vechiChinese vaigona sei kuviga mari yacho pane kuichengetera mwanakomana wavo?